Poll Finds Burmese Public Linking Citizenship to Buddhism | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« NLD Official Condemned After Buddhism Speech
တစ်ကယ်လို့များ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အပေါစား အညံ့စား သတ္တိကြောင်သူတွေ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သူတွေ၊ သီလကြောင်တွေသာဆိုရင် ဒီလောက် များပြားရှည်ကြာနေတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ဆက်မခံတော့ဘဲ မြန်မာအစိုးရအကြိုက် ဘုန်းကြီးတွေပင့်ပြီး ဘာသာပြောင်းလိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် »
This entry was posted on November 18, 2014 at 3:27 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.